स्वचालन प्राविधिक प्रक्रियाहरू को र उत्पादन - एक विशेषता सजिलो, तर आवश्यक छैन। यो के प्रतिनिधित्व गर्छ? कहाँ र कस्तो यो एक पेशेवर स्तर प्राप्त गरेपछि काम गर्न सम्भव हुनेछ?
प्राविधिक प्रक्रियाहरू र उत्पादन को स्वचालन - एक विशेषता, अनुमति, आधुनिक हार्डवेयर प्रविधि र सफ्टवेयर, जो डिजाइन, अनुसन्धान सिर्जना संलग्न प्राविधिक निदान र औद्योगिक परीक्षण सञ्चालन। साथै, उनको महारत छ जो एक व्यक्ति, एक आधुनिक नियन्त्रण प्रणाली सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछ। 15.03.04 (220700.62) - प्राविधिक प्रक्रियाहरू र उत्पादन को विशेषता कोड स्वचालन।
यसलाई ध्यान, तपाईं चाँडै विश्वविद्यालय को विभाग फेला पार्न र त्यहाँ गरिरहेको के देख्न सक्छौं। तर हामी एक पुरा रूपमा कुरा भने, यस्तो विभाग आवश्यक सफ्टवेयर विकास र तिनीहरूलाई शोषण आधुनिक स्वचालित सुविधाहरु सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ जसले विशेषज्ञहरु तालिम। त्यो उत्पादन को प्राविधिक प्रक्रियाहरू को के स्वचालन छ।
विशेष नम्बर कारण नयाँ वर्गीकरण प्रणाली ल्याइयो भन्ने तथ्यलाई गर्न पहिले दुई फरक संख्यात्मक मान को रूप मा ल्याइयो। त्यसैले, पहिलो वर्णन विशेषता पहिले गरेको थियो, त्यसपछि अब denoted रूपमा निर्दिष्ट।
के अध्ययन छ
विशेषता "प्राविधिक प्रक्रियाहरू र खुला स्रोत सफ्टवेयर उद्योग को स्वचालन" तिनीहरूलाई मानव हस्तक्षेप निर्देशन बिना (वा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उहाँलाई लागि रहने) इरादा छन् भनेर प्रक्रिया पूरा नियन्त्रण गर्न अनुमति प्रणाली लागू गर्न उपकरण र विधिहरू को प्रशिक्षण सेट छ।
यी व्यवसायीक को प्रभाव को वस्तुहरु जहाँ त्यहाँ जटिल र दोहोरिने प्रक्रियाहरू छन् गतिविधिको ती क्षेत्रमा सेवा:
सबैभन्दा ठूलो ध्यान प्राविधिक र निर्माण प्रक्रिया, प्राविधिक निदान, अनुसन्धान र परीक्षण भुक्तान छ।
प्रशिक्षण बारेमा विस्तृत जानकारी
हामी अध्ययन, एक विशेषता छ गर्न चाहने वर्णन एक सम्पूर्ण रूपमा छलफल गरेका छन्। अब, को ज्ञान गरौं गरेको विवरण:
सङ्कलन, वर्गीकरण र प्राविधिक प्रणाली र नियन्त्रण मोड्युल डिजाइन लागि आवश्यक कच्चा डाटा विश्लेषण।
महत्त्व, सान्दर्भिकता र काम गरेको भइरहेको छ, जो मा वस्तुहरु को संभावनाहरु आकलन छ।
डिजाइन हार्डवेयर र सफ्टवेयर प्रणाली स्वचालित र स्वचालित प्रणाली।
स्तर र अन्य नियामक कागजातहरू अनुपालनको लागि परियोजनाहरू निगरानी।
यसको जीवन चक्र को सबै चरणमा मा उत्पादनहरु देखाउने एक मोडेल डिजाइन।
सफ्टवेयर उपकरण र कम्प्युटर-सहायता प्राप्त विनिर्माण, विशिष्ट मामला लागि सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त हो जो चयन गर्नुहोस्। र यी परीक्षण, निदान, व्यवस्थापन र नियन्त्रण पूरक।
विभिन्न उत्पादन, यसको निर्माण प्रक्रिया, गुणस्तर, प्रयोग पछि यातायात र निपटान को अवस्था लागि आवश्यकताहरू र नियमहरू विकास।
प्रदर्शन र डिजाइन दस्तावेज एक किसिम बुझ्न सक्षम हुन।
विवाह स्थापित उत्पादनहरु को स्तर आकलन, आदर्श देखि विचलन चेतावनी हुनेछ समाधान विकास गर्न, उपस्थिति को लागि कारण पहिचान।
डिजाइन, प्रक्रियाहरू निर्माण, सफ्टवेयर र प्रमाणित हार्डवेयर।
उत्पादन प्रयोग सन्दर्भमा निर्देशनहरू विकास।
स्वचालन सुधार र केही प्रणाली प्रक्रियाहरू गर्न।
प्राविधिक उपकरण सेवा गर्छन्।
कन्फिगर, निर्माण र व्यवस्थापन स्वचालन प्रणाली, निदान र अनुगमन।
जो नयाँ उपकरण संग काम गर्नेछ कर्मचारीहरु को कौशल सुधार।
के पदों मा तपाईं आशा गर्न सक्छौं
हामी विशेषता "प्राविधिक प्रक्रियाहरू को स्वचालन र उत्पादन" को बीच फरक जांच गरेका छन्। यसलाई निम्न स्थितिहरु मा बाहिर गर्न सकिन्छ मा काम हो:
सर्किट डिजाइन इन्जिनियर।
अर्धस्वचालित लाइनको अपरेटर।
mechanization, स्वचालन र प्रक्रियाहरू निर्माण को स्वचालन को ईन्जिनियर।
डिजाइनर कम्प्युटर प्रणाली।
इन्जिनियर उपकरण र स्वचालन।
स्वचालित नियन्त्रण प्रणाली को विकासकर्ता।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, विकल्प धेरै छन्। र यो खातामा थप र अध्ययन को पाठ्यक्रम भनेर लग्नु गर्नुपर्छ कार्यक्रम भाषाहरूको ठूलो संख्यामा केन्द्रित हुनेछ। यो, तदनुसार, स्नातक पछि रोजगारीका प्रशस्त अवसर दिन्छ। उदाहरणका लागि, एक विद्यार्थी एक वाहक कार मा काम गर्न कार कारखाना जाने गर्न सक्नुहुन्छ, वा इलेक्ट्रनिक्स को क्षेत्र मा microcontrollers, प्रोसेसर, र अन्य महत्त्वपूर्ण र उपयोगी तत्व सिर्जना गर्न।
प्राविधिक प्रक्रियाहरू र उत्पादन को स्वचालन - विशेष जटिल, त्यसैले यसलाई ठूलो जिम्मेवारी आवश्यक संग आउनेछ, ज्ञान को एक ठूलो रकम implying। तर एक इनाम को रूपमा त्यहाँ रचनात्मकता लागि प्रशस्त अवसर छन् भन्ने तथ्यलाई को लग्नु गर्नुपर्छ।
जसलाई सर्वश्रेष्ठ लागि यो बाटो भेट्नुपर्छ हुनेछ
बाल्यकाल देखि यस्तै कुरा मा लगे गर्नेहरूका लागि यो क्षेत्रमा सफल हुन सायद। उदाहरणका लागि, म रेडियो सर्कल, आफ्नो कम्प्युटरको लागि प्रोग्राम जाने वा तीन-आयामी मुद्रक सङ्कलन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यदि यो त, तपाईं संलग्न छन् गर्दैन, त्यसपछि चिन्ता छैन। बस प्रयासको एक धेरै रकम बनाउन छ त्यहाँ राम्रो विशेषज्ञ बन्न मौका।
तपाईं ध्यान पहिलो स्थानमा के आवश्यक छ
भौतिक र गणित - जग विशेष वर्णन छ। पहिलो विज्ञान हार्डवेयर स्तरमा स्थान लिएर प्रक्रियाहरू बुझ्न आवश्यक छ। गणित पनि हामीलाई जटिल समस्याहरूको समाधान विकास गर्न र nonlinear व्यवहार को मोडेल सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
तिनीहरूले कार्यक्रम लेख्न अझै छ जब धेरै को कार्यक्रम संग बैठक गर्दा, "नमस्कार, संसार!", यो सूत्रहरू र एल्गोरिदम को ज्ञान आवश्यक छैन जस्तो देखिन्छ। तर यो एउटा misconception छ, र राम्रो क्षमता इन्जिनियर गणित पोख्त, ठूलो हाइट्स उहाँले सफ्टवेयर घटक को विकास मा हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
के भने भविष्यमा कुनै दृष्टि छ?
त्यसैले, पाठ्यक्रम पारित गरिएको छ, र के को स्पष्ट समझ, कुनै? खैर, यो आफ्नो शिक्षामा महत्वपूर्ण अंतराल को उपस्थिति संकेत गर्छ। प्राविधिक प्रक्रियाहरू र उत्पादन को स्वचालन - एक विशेषता, हामी भने छ रूपमा, जटिल छ, र सबै आवश्यक ज्ञान विश्वविद्यालय दिन हुनेछ भन्ने आशा, यो आवश्यक छ। धेरै योजना मोडमा आत्म-अध्ययन मा हालियो र मानिस आफूलाई अध्ययन भइरहेको विषयमा चासो छ र तिनीहरूलाई पर्याप्त समय दिन हुनेछ implying छ।
यहाँ हामी सामान्य मा विशेषता भएको "प्राविधिक प्रक्रियाहरू र उत्पादन को स्वचालन" जांच। यो निर्देशन स्नातक र यहाँ काम गर्ने व्यवसायीक समीक्षा, तिनीहरूले मूल को जटिलता बावजुद, तपाईं पन्ध्र हजार rubles देखि लिएर, एक राम्रो तलब लागि योग्य गर्न सक्छन्, भन्छन्। र समय, साधारण कौशल को अनुभव र सीप, र एक बढाउनका अप गर्न 000 40 rubles को लागि लागू गर्न सक्षम हुनेछ।! मान्छे सम्भव र धेरै ठूलो रकम प्राप्त छ - र पनि छ कि शाब्दिक शानदार (आत्म-सुधार र विकास गर्न समर्पित धेरै समय गर्नेहरूलाई पढ्नुहोस्) किनभने, छैन कम से कम माथिल्लो बाउन्ड।
भ्लाडिभास्तोक राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय। भ्लाडिभास्तोक को विश्वविद्यालयहरु। VGMU
इंटर्नशिप र रेजिडेंसी - फरक के? प्रशिक्षण कार्यक्रम। डिप्लोमा। गठन
FSIN, वोरोनिश विश्वविद्यालय संकाय र संरक्षित, समीक्षा
ग्रेड 11 पछि बालिका लागि सैन्य विद्यालय। बालिका लागि सैन्य विद्यालय सूची
संसारभरि देशहरूमा जीवनको गुणस्तर। युरोप मा बस्दा मानक
Fascia - एक मानिस ... Fascia
कसरी एक्लै झूमर जडान गर्न।
HUAWEI Ascend G620S: वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
"Lida" kvass - ताजा परम्परा
परम्परागत अभिवादन christening
Zhan Dyuzharden (जीन Dujardin): Filmography, फोटो र अभिनेता को व्यक्तिगत जीवन
शारीरिक विकार र रोगहरु phlox